warkii.com » Madaxda DF & M/goboleedyada oo shir kale caawa u balansan & Qodobada la isku mari la&rsquo;yahay
Madaxda DF & M/goboleedyada oo shir kale caawa u balansan & Qodobada la isku mari la&rsquo;yahay
Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay hey’adaha ka shaqeeya gargaarka in ay sida ugu dhaqsiyaha badan la gaaraan dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay deegaannada qaar ee ka mid ah degmooyinka Dalka.
Mundane Xamsa Saciid Xamsa Wasiirka Gargaarka ayaa sheegay in la joogo waqtigii uu muuqan lahaa doorka hey’adaha gargaarka ku leeyihiin bad baadinta nolosha dadka.
Shir jaraa’id oo uu manta Wasiirka ku qabtay xafiiskiisa ayuu ku faahfaahiyay xaaladaha fatahaadda ee saameeyay deegaannada qaar ee dalka
Wasiirka waxa uu ka hadlay saameynta gaar ahaan roobabkan ku yeesheen degmooyinka Afgooye iyo Balcad oo ka wada tirsan goballada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellada Hoose.
“Roobka xilliga xagaaga oo aad u batay, si gaar ahna ugu badan Koofurta dalka ayaa sababay in ay butaacaan ama fatahaan, qeybo badan oo ka mid ah dalka. Waxaa taasi ay sababtay in ay timaado xaalad baahi bani aadanimo iyo barakac baahsan oo ay sameeyeen dadka ku nool meelaha ay halista ka dhacday. Goballada saameynta ugu badan gaadhay Waxaa kamid ah shebeellada hoose, shabeellada dhexe. Banadir iyo Meelo ka mid ah Jubbooyinka”. Ayuu yiri Xamsa Saciid Xamsa, Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa ugu baaqay hey’adaha ka shaqeeya gargaarka in ay sida ugu dhaqsiyahabadan uga jawaabaan xaaladdan soo cusboonaatay
Waxa uu tilmaamay in dadka barakacay ay qabaan baahiyo kala duwan ee isugu jira dhinaca cuntada, Hooyga.
“Mar haddii ay xaaladda sidaas tahay, waxaa hey’adaha gargaarka ee dalka ka howlgala u farayaa in ay si deg deg ah ay gargaar ula gaaraan meelaha dhibaatada ka dhacday sida Afgooye iyo Balcad, dadka barakacay waxey qabaan baahiyaha asaasiga ah sida cunto, hooy iyo dawo, Wasaarad ahaan waan diyaarsannahay sidoo kale Ayaan ka codsanaynaa hey’adaha in si for fircoon shaqadooda gargaarka ah u gutaan”. Ayuu hadalkiisa ku daray Mudane Xamsa Saciid Xamsa,
Dhinaca kale Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxa uu ka hadlay hails cusub oo ku soo biirtay diiwaanka musiibooyinka ka dhaca Soomaaliya
Mudane Xamsa Saciid Xamsa waxa uu sheegay in dabeylaha oo ku cusub Soomaaliya ay u muuqdaan kuwa isa soo taraya, isagoo si gaar ahna bulshada kalluumeysatada ah uga codsaday in ay ka feejignaadaan dabeylaha xagaaga ee into badan xilliyada oo kale ka dhaca xeebaha dalka.
Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka ayaa ah Wasaarad u xilsaaran ka hortaga, yareynta iyo Maareynta Musiibooyinka, Waxaana Wasaaraddu wadaa howlo baaxad leh oo looga gol leeyahay wax ka qabashada halisyada dalka ka dhaca.